Flowblade Movie Mhariri, rakanakisa vhidhiyo mupepeti weLinux | Linux Vakapindwa muropa
Flowblade Movie Mhariri, rakanakisa vhidhiyo mupepeti weLinux
Flowblade Movie Mupepeti ndeye mahara uye yakavhurwa sosi vhidhiyo yekugadzirisa software yeLinux. Flowblade inoshandisa firimu-dhizaini yekuisa edhita modhi sekufamba kwebasa ine dhizaini nzira yakafanana neiyo Avid.
Mune yekuisa edit, zvikamu zvinowanzoiswa zvisina mwero mushure mezvimwe zvikamu kana zvikaiswa mune yakatarwa nguva. Edits dzakagadziridzwa nekugadzirisa iyo In uye Out mapoinzi ezvimedu kana nekucheka nekubvisa zvikamu zvezvikamu.
Flowblade inovaka hwakawanda hwekushanda kwayo ichishandisa iyo MLT midhiya sisitimu. Mamwe MLT vhidhiyo edhizaina KDEnlive uye Shotcut.
Mamwe maraibhurari anoshandiswa anosanganisira iyo Frei0r uye LADSPA mhedzisiro.
1 Nezve Flowblade
2 Nezve iyo nyowani vhezheni yeFlowblade 2.0
3 Maitiro ekuisa Flowblade paLinux?
Flowblade inotsigira mafomati ese anotsigirwa neFFmpeg kana libav (senge QuickTime, AVI, WMV, MPEG uye Flash Vhidhiyo pakati pevamwe) uye zvakare inotsigira 4: 3 uye 16: 9 maficha ezvePAL, NTSC uye dzakasiyana HD.
Mupepeti anopa maturusi ekuchekesa clip neyakajeka imwe furemu, kuzvigadzirisa nemasefa uye akawanda-chikamu chikamu dhizaini yekumisikidza muvhidhiyo.
Iwe unogona kusarudzira kusarudza kurongeka kwekushandisa kwezvishandiso uye kugadzirisa maitiro eiyo nguva yenguva.
Pakati pehunhu hwayo hukuru hwatinowana:
Kugadziridza nematambo ekufambisa, trim maturusi, nzira dzekuwedzera clip kune iyo timeline, uye dhonza-uye-kudonhedza mashandiro.
Mufananidzo kuumbika nevanyori uye kusanganisa, kusimudzira, kuvheneka uye kutenderera kugona kwehupenyu.
Mifananidzo uye odhiyo kusefa ine anopfuura makumi mashanu mafirita emifananidzo uye anopfuura makumi matatu mafirita ekuteerera.
Yakatsigirwa inogadziriswa midhiya mhando inosanganisira anowanzojairika mavhidhiyo uye odhiyo mafomati, akavakirwa akaisirwa MLT / FFMPEG codecs, bitmaps uye vector mifananidzo, uye akaverengeka mafuremu akateedzana.
Yakavakirwa-mukati chinyorwa chishandiso.
G'MIC Mhedzisiro Turu
Unlimited makiyi emakwenzi eanogoneka clip hunhu.
Iyo yekubuditsa encoding inogona kuitirwa kune akajairika mavhidhiyo uye odhiyo mafomati.
Nezve iyo nyowani vhezheni yeFlowblade 2.0
Kutanga kwe iyo nyowani vhezheni yeFlowblade 2.0, iyo inouya ine akati wandei kugadziriswa uye zvitsva maficha
Kuburitswa kweFlowblade 2.0 kunozivikanwa nekugadzirisa kwakazara kwesangano reiyo vhidhiyo yekugadzirisa maitiro uye nekugadzirisa patsva kweiyo interface.
Iyo yekugadzirisa maitiro pane iyo nguva yakave yakanyanya kugadzirisa uye inonzwisisika.
Zvimwe zviviri zvakajairwa sarudzo zvinorongedzwa zvekugadzirisa maitiro ekutanga.
Kugona kugona kwakawedzerwa kumakiyi akakosha.
Zvishandiso zvitsva (Keyframe, Multitrim, Cheka, Ripple Trim) zvakawedzerwa uye mazhinji eakare akawedzerwa. Iyo nyowani dhizaini dhizaini yakarongedzwa uye iyo interface dhizaini inoenderana nematatu mapaneru yakaitwa
Yehumwe hunhu hunogona kusimbiswa tinowana:
Maturusi gumi nemana ekugadzirisa, 11 acho akaisirwa museti yekushanda.
4 nzira dzekuisa, kutsiva nekubatanidza clip pane iyo nguva.
Iko kugona kwekuisa clip pane iyo nguva muDrag uye Drop mode.
Wakawedzera kugona kubatanidza clip uye mufananidzo comps kune mamwe tenzi clip.
Iko kugona kushanda panguva imwe chete ne9 yakasanganiswa yevhidhiyo uye odhiyo maturu.
Nzira dzekugadzirisa mavara uye nekuchinja manzwi parameter.
Tsigiro yekubatanidza nekusanganisa mifananidzo uye kurira.
10 maitiro ekuumbwa. Keyframe zvishandiso zvemifananidzo zvinokutendera iwe kusanganisa, kuyera, kufamba, uye kutenderera vhidhiyo yekutanga.
19 kusanganisa nzira dzekuisa mifananidzo muvhidhiyo.
Anopfuura makumi mana matemplate ekutsiva mifananidzo.
50 mafirita emifananidzo anokutendera kuti ugadzirise mavara, shandisa mhedzisiro, blur, shandisa pachena, gadzira furemu, gadzira kunyepedzera kwekufamba, nezvimwe.
Anopfuura makumi matatu mafirita eruzha, anosanganisira kiyi-kiyi-inotsanangurwa kusanganisa, kuwedzera echo, reverb, uye kurira kwenzwi.
Maitiro ekuisa Flowblade paLinux?
Kuti ugadzire chishandiso ichi, zvakaringana kuve nerutsigiro kuti ugone kuisa flatpak kunyorera uye kubva kune chinongedzo ita unotevera kuraira:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Flowblade Movie Mhariri, rakanakisa vhidhiyo mupepeti weLinux